Tilaabada 5: Cinwaanka Qodobada Xanuunka Vistors iyo Sidaad uga Tirtirto
Tijaabinta bogag badan oo kala geddisan oo loogu talagalay shakhsiyaadka iyo aaladaha kala geddisan sidoo kale waa istiraatiijiyad weyn. Haddii ay tahay istiraatiijiyad B2B ah, tusaale ahaan, waxaad jeclaan kartaa inaad hesho bog degitaan oo shaqsiyad u leh shirkad kasta oo aad u adeegayso. Ama haddii ay tahay bogga soo degitaanka macaamiisha diirada saaraya, waxaad rabi kartaa inaad shakhsi ahaan ka kooban waxyaabaha iyo sawirada da'da, jinsiga, goobta.
Naqshadaynta bogga wax ku oolka ah ee wax ku oolka ahi uma baahna tan iyo dadaal ama waqti marka aad leedahay xalka bogga degitaanka saxda ah. Xallinta bogagga degitaanku waxay awood kuu siineysaa inaad dhisto bogag deg deg ah oo qurux badan oo leh awood nuqul, tijaabin, is-dhexgal, iyo edit aan dadaal lahayn.
Baadhid Saabuunta, waa xalka bogga soo degitaanka oo si fudud loo isticmaali karo oo awood kuu siin doona inaad ku dabaasho talooyinka ku jira qodobkan!